【आधिकारिक】7-Elevenका लागि खाद्य पदार्थ कारखानामा पार्ट टाइम तथा अस्थायी कर्मचारी भ्याकेन्सी वेबसाइट
【नजिक अनि सुविधाजनक】भन्ने नारालाई सघाउने महत्वपूर्ण कार्य। हामीसँग शुरु गरौँ न ?
7-Elevenका लागि खाद्य कारखानाको कामदार खोजी सम्बन्धी जानकारी
स्वागतम् ‘जापान डेलिका फुड्स सहकारी संघ’को कामदार खोजीको वेबसाइट तर्फ !
यो वेब साइटमा जापान डेलिका फुड्स सहकारी संघमा सम्बन्धन भएका खाद्य कारखानाको पार्ट टाइम तथा अस्थायी कामदार खोजी सम्बन्धी जानकारी राखिएको छ। हामी देशभरका 7-Elevenमा बिक्रि गरिने साइड डिस, लञ्च प्याक,नुडल, पाउरोटी तथा मिठाइहरू बनाउँछौं। आवेदन खुला गरिएको खाद्य आइटमको ‘पकाउने तथा सजाएर राख्ने’ ‘क्रमबद्ध मिलाउने’ कार्यमा हो। कुनै ज्ञान तथा अनुभवको आवश्यकता छैन। सिनियर कर्मचारीहरूले होशियारीका साथ तपाईँलाई सघाउने छन्। थुप्रै विदेशी विद्यार्थी तथा विदेशी नागरिकहरू पनि काम गरिरहेका छन्। निश्चिन्त भई आवेदन दिनुहोस् ।
तपाईंको रुचिको क्षेत्र छनौट गर्नुहोस्।
〔कामको किसिमबाट कर्मचारी भ्याकेन्सी खोज्ने〕
परिकार बनाउने तथा सजाएर राख्ने
क्रमबद्ध मिलाएर राख्ने
खाद्य पदार्थ कारखानाको कामको बारेमा
कामकार्य, तपाईँको काम गर्न मिल्ने अवस्थासँग मिलाएर गर्न सकिन्छ।
7-Elevenमा हरबखत ताजा खाद्य सामाग्री उपलब्ध गराउनका लागि हाम्रा खाद्य फ्याक्ट्रिहरू २४सै घण्टा चलिरहेका हुन्छन्। शनिबार, आइतबार तथा सार्वजनिक बिदाका दिन समेत गरि बर्षैभर चलिरहेका हुन्छन्। अस्थायी तथा पार्ट टाइमका कर्मचारीले दिवा, रात्री, छोटो समय वा पूर्ण समय,हप्तामा २देखि ३ पटक वा ५ पटक आदि काम गर्नका लागि विभिन्न स्थितिलाई आफ्नो अवस्थासँग मिलाएर रोज्न सक्नेछन्। सिफ्ट परिवर्तनशील भएकोले आवेदन गर्दा निश्चिन्त भई सल्लाह गर्नुहोला।
परिकार बनाउने काम विभिन्न खण्डमा बाँडिएको हुन्छ र सबैको सहयोगमा खाद्य परिकार बनाईन्छ | समग्रमा भन्दा कच्चा पदार्थको तयारी, प्रारम्भिक तयारी र ताप दिने भाग हुन्छन्। कच्चा पदार्थको तयारी तथा प्रारम्भिक तयारीमा परिकारका लागि आवश्यक सागसब्जी वा अन्नलाई पखाल्ने, काट्ने गर्नुका साथै जोख्ने नाप्ने वा तोकेको अनुपातमा त्यसको मात्रा मिलाउने आदि पर्दछन् । ताप दिने भन्नाले आफ्नो घरको भान्सामा खाना पकाउने अवश्थाको कल्पना गरि त्यो भन्दा ठूलो हुने भनि सोच्नुहोला। विभिन्न खालका विशेष साधनहरू हुन्छन् र स्थिर रूपमा स्वादिलो परिकारको तयारी होस् भनि पोल्ने,उमाल्ने,तार्ने तथा पकाउने आदि जस्ता हरेक खण्डमा कौशलपूर्ण ध्यान दिइएको छ। एकै पटकमा ठूलो परिमाणमा तयारी गरिने हुनाले सबै भाग बराबर रूपमा तयार गर्ने काम सजिलो हुँदैन तर यस विशेष साधनद्वारा हरेक दिन ग्राहक समक्ष स्वादिलो परिकार पेस गर्न सम्भव भएको छ।
सजाएर राख्ने कार्य, खाद्य सामग्रीको रूपरङ्ग बनाउने कार्य भएको हुनाले परिकार तयारी कार्य मध्यको महत्वपूर्ण कार्य हो। परिकार तयारी कार्यको विभिन्न शाखामा बनाइएका खाद्य पदार्थलाई ग्राहकहरूले देख्ने बित्तिकै लिन चाहने खालको हुने गरि तोकिए अनुसार सुन्दर तथा स्वादिलो देखिने गरि सजाएर भाग लगाइन्छ। जतिनै स्वादिलोसँग परिकार तयार गरे पनि हेर्दा खेरी जथाभाबी भाग लगाएमा ग्राहकले किन्न चाहन्दैनन्। 7-Elevenको पसलमा राखिने सामाग्रीहरू,उदहारणको लागि माकुनोउचि बेन्तो तथा हियासी च्युका आदिमा, विभिन्न खाद्य पदार्थ सजाएर भाग लगाइ राखिएको छ, है |परिवारका सदस्यको लञ्च बनाउने जस्तो भावना बोकेर परिकार तयार गर्छौं।
देशभरका 7-Elevenबाट आउने अर्डरलाई पूरा गर्न, आवश्यक सामाग्रीलाई त्यसको माग भए अनुसार पुर्‍याउनका लागि तयार भएका सामग्रीलाई पसल अनुसार भागबन्डा गरिन्छ। पसलमा हरबखत विभिन्न सामाग्रीले भरिभराउ गरेर ग्राहकको स्वागत गर्नका लागि अर्डर अनुसारको सामाग्रीलाई निश्चित रूपमा पुर्याउनु महत्वपूर्ण हुन्छ। आफूहरूले तयार गरेको सामाग्री ग्राहकको हातमा पुगी स्वादिलोसँग खाई देओस् भन्ने भावनाले कन्भिनियन्ट स्टोर तर्फ सामान पुर्‍याउने ट्रकलाई बिदाई गरिन्छ।
कामदार खोजीको सूची हेर्ने
जापानी भाषा अनिवार्य हो ?
उत्तर सहायता गर्ने सिनियर कर्मचारी हुने हुनाले अनिवार्य भन्ने छैन। जापानी भाषा बुझ्नमा कठिनाइ छ भने आवेदन गर्न नसकिने काम पनि छ।
अस्थायी काम (पार्ट टाइम)को अनुभव नभएपनि आवेदन गर्न सकिन्छ ?
उत्तर अवश्य सकिन्छ। सिनियर कर्मचारीले राम्रोसँग सिकाइदिन्छन् अनि सजिलोसँग गर्न सकिने कामको जिम्मा लिई कामकाजको शुरुवात गरिन्छ।
अस्थायी काम (पार्ट टाइम)मा आवेदन गर्नका लागि उमेरमा रोकतोक छ ?
उत्तर छैन | रात्री तथा बिहान सबेरैको सिफ्टमा १८ बर्ष भन्दा माथिको हुनुपर्छ।
कपालको ढाँचा तथा लुगाफाटोमा रोकतोक छ?
उत्तर हर बखत सुग्घरसफा भई सुकिलो लुगाफाटामा हुनु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। कुनै कुनै काममा खाद्य शुद्दताको बिचार गरि नङ तथा कपाल अप्राकृतिक रूपमा रङ्ग्याउन पाइन्दैन।
प्रश्न अन्तरवार्तामा लिएर आउनुपर्ने सामान छ कि?
उत्तर फोटो सहितको बायोडाटा साथै रेजिडेन्ट कार्ड (योग्यता बाहेकको कार्य अनुमतीको उल्लेख गरिएको भाग)लाई लिएर आउनुहोला।
＊अन्तरवार्ताको नतिजा जे भएपनि बायोडाटा फिर्ता नहुने हुनाले ध्यान दिनुहोला।
यातायात खर्च उपलब्ध गराइन्छ ?
तोकिएको परिधि भित्रको यातायात खर्च उपलब्ध गराइन्छ। कार्यस्थल अनुसार नि:शुल्क लिन जाने तथा पुर्‍याउने बसको व्यवस्था पनि छ।
©जापान डेलिका फुड्स सहकारी संघ
Powered by Hiring Solutions